कोरोना भाइरस र से क् सका छन् यस्ता छन जिज्ञासाहरु - Muldhar Post
कोरोना भाइरस र से क् सका छन् यस्ता छन जिज्ञासाहरु
यतिबेला विश्व महामारी कोरोनाभाइरसले विश्वभर सन्त्रास फैलाइरहेको छ। कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट विभिन्न किसिमका उपायहरु पनि अवलम्बन गर्न सुरु भइसकेको छ।
कोरोनाभाइरसले हाम्रो दैनिकवनमा नराम्ररी प्रभावित पारिरहेको छ। यस्ता अनगिन्ती प्रश्नका बीच कोरोनाले यौनजीवनमा पार्ने असरबारेका प्रश्न उब्जिनु स्वभाविकै हो। कोरोना र यौनजीवनमा यसको असरका विषयमा बीबीसीले तयार पारेको यो रिपोर्ट पढौँ–
के यौ न सम्प र्कका कारण कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण सर्न सक्छ? यसबारे तपाईँले सोच्नुभएको होला तर सङ्कोच लागेर प्रश्न नगर्नु भएको पनि हुन सक्छ। यस विषयमा सही र गलत कुरा छुट्यावन बीबीसी रेडिओ वनको न्यूजबीटले यो प्रश्न विज्ञहरूलाई राखेको छ।
डा. एलेक्स जर्ज चिकित्सक हुन् भने यौन विषयमा पत्रकारिता गर्ने एलिक्स फ क्स बीबीसी रेडिओकी पूर्वप्रस्तोता हुन्। के कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा यौन सम्पर्क सुरक्षित राख्नु सुरक्षित हुन्छ?
एलिक्स फक्स: आफूलाई लक्षण देखिँदा आफ्नो सहवासीलाई पनि देखिन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन। यदि तपाईँलाई लक्षण देखिएको छ भने टाढा रहनु नै उचित हुन्छ। नयाँ मानिससँग यौन सम्पर्क राख्नु हुन्छ? एलेक्स जर्ज: म यो अवस्थामा नयाँ मानिससँग यौन सम्पर्क राख्ने सल्लाह दिन्नँ। किनभने त्यसो गर्दा कोरोनाभाइरस सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।
एलिक्स फक्स: के नबिर्सिनुहोस् भने कोरोनाभाइरस भएका केही मानिसहरूमा लक्षण देखिएको हुँदैन। त्यसैले तपाईँ एकदमै ठिक देखिनुभएको छ भने पनि तपाईँबाट अरूमा चुम्बनबाट पनि भाइरस सर्न सक्छ। पहिले मैले कन्डम प्रयोग गरेको थिइनँ। के अब गर्नुपर्ला? एलिक्स फक्स: यसको उत्तर तपाईँ किन पहिले कन्डम लगाउनु हुन्नथ्यो भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ।
के यौनाङ्ग छोएका कारण कोरोनाभाइरस सर्छ? डा. एलेक्स जर्ज: यदि तपाईँ एकअर्काको यौनाङ्ग छुनुहुन्छ भने त्यो समयमा तपाईँहरूले चुम्बन गर्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ र हामीलाई थाहा छ भाइरस थुकबाट सर्छ।
मुखबाट हातमा, हातबाट यौनाङ्गमा, यौनाङ्गबाट हातमा र त्यसपछि हातबाट नाकमुखमा भाइरस सर्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा भाइरस सर्न सक्ने सबै खाले कुराहरू नगर्नु नै उचित हुन्छ। त्यसैले तपाईँसँगै नबसेका साथीसँग यो पनि नगर्नु नै उचित हुन्छ। – बीबीसी नेपाली सेवाबाट
थ्रोट स्वाबको नमुना सकिएपछि
५ सय बढी संक्रमित
यम थापाको नयाँ फिल्लमा
बाजुराका प्रहरी नायव उपरिक्षक